Umbhede wamawele wangokwezifiso kanye nesethi yasentwasahlobo yebhokisi Umkhiqizi | Rayson
Ngokuthembela kubuchwepheshe obuthuthukisiwe, amakhono amahle kakhulu okukhiqiza, kanye nenkonzo ephelele, uRayson uyahola embonini manje futhi usabalalisa iRayson yethu emhlabeni wonke. Kanye nemikhiqizo yethu, izinsiza zethu nazo zihlinzekwa ukuze zibe sezingeni eliphezulu. amawele amabili kanye nesethi yasentwasahlobo yebhokisi Besitshala imali eningi emkhiqizweni we-R&D, okuvele ukuthi uyasebenza ukuthi sithuthukise imibhede emibili kanye nesethi yentwasahlobo yebhokisi. Ngokuthembela kubasebenzi bethu abasungula izinto ezintsha nabasebenza kanzima, siqinisekisa ukuthi sinikeza amakhasimende imikhiqizo engcono kakhulu, amanani avumayo kakhulu, kanye nezinsizakalo eziphelele kakhulu. Siyakwamukela ukuthi usithinte uma unemibuzo.Umkhiqizo uqinile futhi uhlala isikhathi eside. Ngeke ilahlekelwe isimo sayo noma ibukeke igugile ngemva kwezikhathi zokuwashwa. Yenziwa ukuthi ihlale iminyaka, kunokuba ilahlwe ngemva kwesizini eyodwa noma ezimbili.